नेपाली सेनामा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेर अनियमितता ! | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार २७, २०७७ chat_bubble_outline1
देशभर ९५ हजार सैनिक कार्यरत छन् । समग्रमा सेनालाई खुवाइने दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा दैनिक ५ लाख २० हजार रुपैयाँ ज्यादा खर्च भइरहेको छ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष राज्यको १९ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च भइरहेको छ ।
कानुनतः स्वीकृत रासन स्केलभन्दा माथिको बिल भुक्तानी गर्नु ठाडो अनियमितता हो । यहाँ त बर्सेनि दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा १९ करोड ज्यादा भुक्तानी भइरहेको छ, र यो अनियमितमा संलग्नलाई प्रधानसेनापतिको ‘शून्य सहनशीलता’को कुचोले छुनसम्म पनि सकेको छैन ।
स्वीकृत रासन स्केल र दररेट देखिने फोटो
यति मात्र होइन, डेरीको दूधमा पानी मिसाएर दिइएकाले उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, सेनाभित्र जवानहरुको असन्तुष्टिको कुनै मूल्य हुँदैन । जंगी अनुशासनका बीच उनीहरु खुलेर विरोध गर्न वा असन्तुष्टि पोख्न सक्दैनन् । निर्णायक तहका हाकिमहरुलाई त ठेकेदारले काढेको महमा हात चोपलेर चाट्न पाउन्जेल कुनै अब्जेक्सन हुने कुरै भएन ।
(महिन्द्र दल गण, लिपिकोट ब्यारेकलाई श्यामबाबा इन्टरप्राइजेज प्रालिले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल, जसमा वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)
(नम्बर ७ बाहिनी अड्डा, चनवनलाई उत्तम स्टोरले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल । यहाँ पनि वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)
अर्कातिर, कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा गहिरिएको संकटबीच सेनाको खाद्य गुणस्तर पनि संकटमा पर्न थालेको छ । लकडाउनलाई बहाना बनाएर सैनिक जवानलाई खसीको मासु खुवाउन छाडिएको खबर यसअघि नै प्रकाशित भएका थिए ।
खबर बाहिरिएसँगै सेनाभित्र र सरोकारवाला पक्षहरू माझ निकै हलचल मच्चिए पनि नियमित रुपमा खसीको सप्लाई अझै भएको छैन । तर, बिलमा भने खसीको मासुको पूरै परिमाणमा भुक्तानी भइरहेको छ ।
चामलको हालत पनि उस्तै छ । जिरा मसिनो चामलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मोटा चामल मिसाएर खुवाइरहेका छन् । सैनिक ब्यारेकभित्रबाटै हामीलाई प्राप्त चामलको नमुनामा मोटा दाना मात्रै छैन, पहेँला दाना र कुहिन थालेको जस्तो चामल देखिन्छ ।
देशभरका ६५ प्रतिशत ब्यारेकमा एउटै समूहका ठेकेदारले रासन सप्लाई गर्छन् । उनीहरूले जस्तोसुकै सामान सप्लाई गरुन्, त्यो स्वीकार्य हुन्छ ।
यसबारे सैन्य प्रवक्तासँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
#नेपाली सेना#युनिट हाकिम
July 16, 2020, 11:17 a.m. Mil sumsher sjbr
The COAS is all in all....it isaone man army...hence, he is accountable and well informed of all the ongoing corruption....he is biased and prejudiced on penal actions taken against the alleged. In big deals, he himself is involved but tries to fake his acts of embezzlement by victimizing mid level and some senior officers on charges of corruption, as if to prove his zero tolerance policy against corruption for the sake of cheap individual popularity, while putting the institutional reputation at stake......a drama withinadrama!!!